मुटु देखि क्यानसर रोगको जोखिमबाट बचाउने फाइबरको जान्नुहोस् थप फाइदा ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
मुटु देखि क्यानसर रोगको जोखिमबाट बचाउने फाइबरको जान्नुहोस् थप फाइदा !
अहिले देशैभरी जाडो बढेको छ । अझ काठमाडौमा त जाडोसँगै वायु प्रदुषण पनि खतराको तहमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न अति आवश्यक मानिन्छ ।
जाडो मौसमा हामीलाई स्वास्थ्यमा धेरै समस्याहरु देखिने गर्छन् । हाम्रो शरीरमा पनि जाडोमा छाला देखि पाचन प्रणालीमा समेत समस्या देखिने गर्छ र यस्तो मौसमा शरीरको आवश्यकतामा पनि परिर्वन आउने गर्छ । जाडोमा हामीले आफ्नो शरीरमा चाहीने पोषक तत्व सन्तुलित तरिकाले खानु पर्छ ।
यदि पोषण तत्व असन्तुलन हुन गयो भने हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम हुन जान्छ फल स्वरुप हाम्रो शरीरमा धेरै प्रकारका जटिलताहरु देखिन थाल्छ ।
प्राय मानिसलाई जाडो मौसमा पाचन प्रणालीसँग सम्वन्धीत समस्या आउने गर्छ । धेरै जसोलाई जाडोमा कब्जीयतको समस्या मुख्य हुने गर्छ ।
किन भने हामीले जाडोमा पानी कम खाने गर्छौ जसको कारण हाम्रो शरीरमा क्यालोरिको मात्रा बढी हुन्छ अनि त्यहि अनुसार हामीले शारीरिक श्रम पनि गर्दैनौ फलस्वरुप हाम्रो शरीरमा शक्ति सञ्चय हुन पुग्छ त्यसपछि हामीलाई बढी समस्या आउने गर्छ ।जाडो मौसममा हाम्रो शरीरलाई फाइबरको आवश्यकता बढी हुने गर्छ ।
त्यसकारण हामीले जाडोमा फाइबरयुक्त खाना खान एकदम जरुरी छ । फाइबर हरियो पत्ता भएका सागसब्जीमा पाइने एक प्रकारको कार्बोहाइड्रेट हो ।सामान्यतया फाइबर दुइ प्रकारको हुने गछन्
१.सोलुबल फाइबर ती हुन् जसलाई हामी निकै सजिलै चपाउन सक्छन् । जस्तैः स्याउ, अम्बा इत्यादि ।
फाइबरका ५ फाइदाः
1. कब्जियतको समस्या हटाउँछः
खानामा अत्यधिक फाइबर समावेश गर्दा पाचन क्रिया पनि बलियो रहन्छ । यसले कब्जियतजस्ता समस्याबाट छुटकारा दिलाउँछ । डा। निधिका अनुसार फाइबरले हाम्रो शरीरमा ब्रसको काम गर्छ । यसले शरीरको सबै टक्सिक लोडलाई कम गर्नु हो ।
2.मुटुका लागि फाइदाजनकः
यदि शरीरमा कोलेस्ट्रोलको स्तर बढी छ भने यो मुटुका लागि निकै खतरनाक हो । यसका कारण मुटुसँग जोडिएका रोग पनि निम्तिन सक्छ । फाइबरयुक्त खाना खाँदा कोलेस्ट्रेल नियन्त्रणमा हुनेछ । शोधमा पाइए अनुसार उच्च फाइबर भएका खानालाई डाइटमा समावेश गर्दा मुटुरोगको सम्भावनालाई कम त गर्छ नै यसले मुटुलाई थप बलियो पनि बनाउँछ ।
3. क्यान्सरको जोखिममा कमीः
4.तौल घटाउन मद्दत गर्छः
5.रक्तचाप र सुगरका लागि प्रभावकारीः
उच्च रक्तचापको समस्या साधारण स्वास्थ्य समस्यामध्ये एक हो । यसका कारण हृदयघातको जोखिम बढ्ने गर्छ । फाइबरले भरिपूर्ण खानाले रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्छ । यसले रक्तचाप मात्रै नभई ब्लड सुगर पनि नियन्त्रणमा राख्छ ।एजेन्सी
जान्नुहोस् : यौन जीवन उत्कृष्ट बनाउन के खाने, के नखाने ?
बर्तमान समयमा सम्बन्ध कमजोर बन्दै गइरहेको छ । समयसँगै मानिसको जीवनशैलि पनि परिर्वतन हुदैँ गएको
के तपाई मोटोपनबाट छुटकरा पाउन चाहानुहुन्छ ? पिउनुस् यी ३ पेयपदार्थ !
अहिलेको बर्तमान समयमा मानिसको जीवन शैलीमा परिर्वतन भएको छ । अहिलेको आधुनिक जीवनशैलीसँगै उनीहरुको खानपिनमा
‘योग गरौँ डटेर, कोभिड जान्छ हटेर’ भन्दै राष्ट्रिय योग दिवस मनाइयो
‘योग गरौँ डटेर, कोभिड जान्छ हटेर’ प्रमुख नाराका साथ छैटौँ राष्ट्रिय योग दिवस-२०७७ आज यहाँ
मेडिटेरेनियन डाइट भनेको एक प्लान्ट बेस्ड डाइट हो जसमा फलफूल, सागसब्जी, गेडागुडी, दाल र ओलिभ ओयलजस्ता
शारीरिक सम्भोगसँग जोडिएका यी हुन् ७ प्रकारको डर! जसले धरैलाई तनावमा पार्छ
बैवाहिक जीवनलाई सन्तुलन राख्न शारीरिक सम्वन्ध एकदम महत्वपूर्ण मानिन्छ । यदि यौन सम्वन्ध राम्रो भएन